‘’Tsy fantatr’izao tontolo izao ny harena ananan’ny literatiora nepaley” : resaka nifanaovana tamin-dRtoa Dr. Sangita Swechcha · Global Voices teny Malagasy
Asa fandikàna manokatra ny varavarana ho an'ny literatiora nepaley
Nandika (fr) i Loreana Ranson Rospidegaray
Voadika ny 04 Septambra 2019 16:24 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, Italiano, čeština , Français, Română , 繁體中文, Ελληνικά, বাংলা, русский, नेपाली, English
“Gulafsangako Prem” tao amin'ny kaonferansa nepaley iraisampirenena natao tao Londona ny 3 hatramin'ny 5 Aogositra 2019. Sary natolotr'i Dr. Sangita Swechcha.
Endrika iray tsy zoviana amin'ny literatiora nepaley i dokotera Sangita Swechcha, izay monina any Angletera: ireo tononkalony, ny tantara sy lahatsoratra nosoratany dia navoaka tany Nepal sy tany amin'ny Fanjkakana Mitambatra. Ny asany tamin'ireny tononkalo ireny dia efa nalefa ihany koa tao amin'ny Radio Nepal sy ny fahitalavitra Nepal Television. Namoaka ihany koa izy tantara iraisana voafantina, ny “Ashamati ka Pailaharu” sy “Gulafsangako Prem” amin'ny teny nepaley.
Nahazo setriny tsara avy amin'ireo mpitsikera literatiora ny tantara an-tsoratra noforoniny voalohany, “Pakhalieko Siundo”, fony izy vao 18 taona. Miresaka fivenjivenjena fihetsehampo nananan'ny vehivavy nepaley iray, Sandhya, izay miditra any anatin'ny hirifiriny, ny fijaliany ary ny fikirizany hihoitra handresy ny lasany. Asongadiny ihany koa ny olan'ny fanondranana olona any Nepal. Niresaka taminy ny Global Voices, momba ny asany sy ny aingam-panahiny amin'ny asa fanoratana :
Global Voices (GV) : Oviana ianao no nanomboka nanoratra?
Dr. Sangita Swechcha (SS):Tsy tsaroako ny taona tena marina fa fony mbola roambinifolo na teloambinifolo taona aho no nanomboka nanoratra. Tsy haiko na tononkalo na tsia izy izay fa fahazàrako fotsiny ny maneho an-tsoratra izay rehetra tsapako. Ankizivavy sarokenatra sy nikombonkombona izay aho, ary tamin'ny ankapobeny dia mipetraka milamina sy mihaino ny hafa fa tsy miresaka amin'izy ireo na milaza hevitra manoloana an-dry zareo. Nahatsiaro ho nahazo aina aho tamin'izany rehefa maneho ny tiako ambara atao an-tsoratra, ary tany am-piandohana izy io dia nivoaka tamin'ny endrika tononkalo.
GV : Iza no nitondra aingam-panahy tao aminao mba hanoratra amin'ny teny nepaley?
SS: Teny ofisialy ao Nepal ny teny nepaley sady, amin'ny maha-Nepaley ahy, mahazo aina kokoa aho amin'ny nepaley raha oharina amin'ny anglisy. Tsy tsaroako ny fomba nahavitàko nanoratra, fa nanohana hatrany ny asako i dada sy neniko. Tany am-boalohany dia tsy nomeko novakian'ireo ray aman-dreniko ny asako. Fa taona vitsivitsy lasa izay dia nataoko izany, tamin'ny fotoana nanambarako tamin'ireo nahitako masoandro fa tia nanoratra aho ary efa fotoana elaela ihany no nanoratra. Fony aho tovovavy, nafeniko na norovitiko ireo asa soratro. Heveriko fa ny natiora nanodidina ny tranoko no voalohany nitondra aingampanahy ho ahy. Hatrizay aho no zendana amin'ny hatsaran'ny natiora.
GV : Lazalazao anay ny momba ilay bokin-tantara noforoninao “Pakhaliek Siundo”.
SS: Ny bokin-tantara noforoniko “Pakhalieko Siundo” dia miresaka ny fandeferana manoloana ny vehivavy, ny fanaintainana sy ny fijaliana, ary ny fomba mahatonga ny zavatra manodidina ho vao mainka mampahery an-dry zareo. Tantarainy ihany koa ny tantaran'ireo vehivavy izay atokan'ny vadiny na ny olon-tiany ho amidy toy ny entambarotra. Tantaranà vehivavy iray matanja-tsaina io, izay, na teo aza ireo sakana napetraky ny fiainana, dia nitolona mba ho velona sy hijanona ho mahery hatrany, miroso eo amin'ny fiainany no sady manatontosa ny nofinofiny.
Fony aho 18 taona no namoaka io bokin-tantara io, rehefa avy namarana ny kilasy famaranna tao amin'ny lisea St Xavier ao Népal. Rehefa niandry ny valim-panadinako aho, tsy nisy natao ary dia nieritreritra ny hanoratra tantara vitsivitsy. Nanomboka iray aho tamin'izany ary tena nifofotra ka notohizako foana ny nanoratra, izay lasa nanjary ho boky misy pejy 265 pejy no niafaràny. Mbola zendana mandrakariva aho tamin'ny fomba nanoratako io tantara lavabe io tamin'izany taonako izany. Rehefa vita ilay izy, nandrisika ahy mba hamoaka ilay izy ny raiko, teo no nahatsapako, araka izany, fa tamin'ny safidiko ho lasa mpanoratra dia tena zavadehibe ny fanohanan'ireo nahitako masoandro nandritra ireny andro voalohany nanombohako ireny. Nanam-bintana ihany koa aho satria nankafizina sy nolalain'ireo media, mpitsikera ary nepaley mpamaky, taorian'ny namoahako boky. Taona vitsy taorian'izay, nirotsaka tao anatin'ny literatiora aho saingy bebe kokoa tany anatin'ireo hetsika mifandray amin'ny literatiora ao Nepal. Iray tamin'ireny hetsika ireny ny famoahana gazetiboky iray mivoaka isambolana, natao ho an'ny literatiora, nampitondraina anarana hoe “Aakash” ; tale lefitra ny asako tao. Ny famoahana ilay tantara voalohany noforoniko dia nahafahako ihany koa nanoratra ho anà gazety marobe mpivoaka isanandro tao amin'ny firenena sy ireo mpivoaka isankerinandro ao Nepal, ary nanomboka nekeko ireo tolotra mba hanoratra tsanganana fanadihadina sy tatitra. Mandeha isankerinandro ao amin'ny onjampeo Capital FM 96.4 izao ny tantara foroniko, ary tena faly tokoa aho hoe alefa ho anà mpihaino midadasika kokoa ilay izy ao Nepal sy ny manodidina (mivantana ao amin'ny Online radio ary midsy dika mipetraka ao amin'ny Youtube). Eo amperiny ihany koa aho izao miasa manomana ny andiany faharoa amin'io tantara noforoniko io, ary manantena ny hanana dika mivoaka amin'ny teny anglisy ato ho ato.
GV : Ahoana no fijerinao ny toerana misy ny literatiora nepaley ao anatin'ny taonjato faha-21?
SS: Efa nanomboka nampiasaina tany anatin'ny literatiora nepaley tamin'ny taonjato faha-19 ny teny nepaley. Tany aloha, tamin'ny teny sanskrit no nanoratana ny literatiora nepaley. Ny asa soratra voalohany tamin'ny teny nepaley dia ny Ramayana an'i Bhanubhakta (1883), araka izany dia tantara efa an-jato taona mahery ny an'ny literatiora nepaley. Marobe ireo karazana literatiora navoaka nandritra io vanimpotoana io ary vetivety dia nitombo be tamin'ny taonjato faha-21. Tsy hoe nivoatra fotsiny tamin'ny hamaroany izy ireny satria ny hatsaràn'ny lliteratiora nepaley dia nihatsara ihany koa. Fanampin'izany, isantaona dia misy famoahana karazam-boky samihafa miaty karazana fiangaly isankarazany sy fomba firoso mitondra fanavaozana. Koa satria tamin'ny teny nepaley no nanoratana ny ankamaroan'izy ireny, tsy vitan'ny tontolo ivelany ny hamantatra ny harena ananan'ny literatiora nepaley, iraka izany dia somary mihataka amin'izao tontolo izao ity farany. Na izany aza, efa an-dalam-piovàna ny teodraharaha. Tsy hoe fotsiny ny isa mitombon'ireo Nepaley mpanoratra misafidy ny hanao ny asany ho amin'ny teny anglisy, fa koa ny fipongaran'ireo fandikàna asa literatiora avy amin'ny teny nepaley ho aminà tenimpirenena hafa. Inoako fa miaraka amin'io fironana io, hifankazatra amin'ny literatiora nepaley ny olona ary dia ho hitan'izao tontolo izao izy.
Fanampin'izany, ny fanatontoloana amin'izao fotoana izao dia manampy ireo Nepaley mpanoratra hiparitaka any amin'ny lafivalon'ny tany. Mba hamondronana ireo Nepaley mpanoratra manerantany ho ao anaty vovonana iray iraisana, dia najoro ireo rafitra toy ny Sosaity Iraisampirenena ho an'ny Literatiora Nepaley (INLS amin'ny teny anglisy) . Manana rantsana any aminà firenena valopolo mahery ny INLS. Ohatra iray amin'izany ny kaonferansa iray natao vao haingana tao Londona nivondronan'ireo Nepaley mpanoratra an-jatony mahery monina any amin'ny firenena roambinifolo samihafa mba haneho ny fahavononan'izy ireo amin'ny fampandrosoana ny literatiora nepaley amin'ny alàlan'ny fandrisihana ireo nepaley mpanoratra any am-pielezana sy ireo mipetraka ao Nepal. Tao amin'ilay kaonferansa ihany koa no natolotra voalohany ilay fantina tantara noforonina voasoratra amin'ny teny anglisy, nomena anarana hoe « Silver Cascade » . Ilay boky, natontan'ny Book Hill publication ao Népal, dia managona ireo tantara voasoratr'ireo mpanoratra malaza. Antenaintsika fa ireo literatiora nadika avy amin'ny teny nepaley dia hahasarika ny saina sy ny fitiavanan'ireo mpamaky eny anivon'ny tsena iraisampirenena, ary ho tsindrian-daona ry zareo hamaky misimisy kokoa an'ireny asa fanontàna ireny. Mandritra izany, ny bokiko fanangonana ireo tantara, « Gulafsangko Prem », dia isan'ny ao anatin'ny dingana fandikàna azy ho amin'ny teny anglisy.
Tamin'ny alàlan'ny imailaka no nanaovana ity antsafa nifanaovana tamin'i Dr. Sangita Swechcha ity.